Mogadishu Journal » Golaha shacabka oo meel mariyay xubin ka mid noqoneysa guddiga dib u eegista Dastuurka
Mjournal :-Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta ayaa meel mariyay xubin ka mid noqon doonta Gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
Golaha Shacabka ayaa cod aqlabiyadleh ku ansixiyay xubinnimada Muumino Shiekh Cumar, oo noqoneysa Xubin ka mid ah Guddiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka
Muumino Sheikh Cumar ayaa lagu wadaa iney marto xildhibaanada Aqalka sare si ay iyagana u ansixiyaan markaasi oo ay noqon doonto xubin buuxdo oo ka mid ah Gudiga madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka.
Muumino Sheikh Cumar oo ka mid ahayd Xildhibaanadii hore ayaa dhawaan waxaa sidan oo kale soo meel mariyay Xubinnimadeeda Guddiga Madaxa banaan ee hirgelinta iyo dib u eegista dastuurka Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Muumino ayaa ka mid ah aheyd xildhibaano looga guuleestay doorashadii Xildhibaanada ee Soomaaliya waxayna ka tirsaneyd 8-dii Xildhibaan Maxkamadda sare u gubiyay cabasho ay ka qabeyn qaabkii looga guuleestay.
Madaxweynihii dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax oo la sheegay in la dilay